SEENAA MALKOLM X – KUTAA SADAFFA-Temesgen Atnafu Mulatu’tiin-Seenaa Irraa barachuu qabnudha! – Beekan Guluma Erena
SEENAA MALKOLM X – KUTAA SADAFFA-Temesgen Atnafu Mulatu’tiin-Seenaa Irraa barachuu qabnudha!	Beekan Erena
Politics Category, Seenaa June 18, 2016OROMO
SEENAA MALKOLM X
HAALLI GAA’ELAAFI MAATI MALKOLM X MAAL FAKKAATA TUREE?
Bara 1955 Beetty Saanders barsiisa Malkolm X godhe tokko irratti isa agartee. Yeroo lammataaf Afeeraa Irbaata tokko irratii erga agarteeni booda barsiisa isaa yeroo hundaa hordofuu eegaltee. Bara 1956 erga Maatii Musilimaatti makamtee booda maqaa ishii Betty X tti jijjiratte. Qofaatti dhiirriif dubarri beellamaan wal arguun waan barsiisa isaanii wajjin hin deemneef waan ta’eef cimdiwwan kan wal argan ennaa dhimmi hawaasumma namoota baay’ee walitti qabu jiraatu waan ta’eef Malkolm akka isheen do’ii muziyemiif Library gara Niw Yorkitti ta’uu irratti afeereenii.
Malkolm bilbilaan amajji bara 1958 bilbilluniif akka wal fuudhuu qaban himeefi guyyaa lamaan booda wal fuudhan. Waliin ijjolee ja’aa horan.
HINTON JOHNSONIIN WAAN RAAWWATAME!
Ummatnii Amerikaa waa’ee waa’ee Malkolm X kan quba qabachuu egalee bara 1957 erga Hinton Johnson polisoota New yorkiin rebameedhaa. Muddee 26 ture dubbichi; Johnsoniif Maatii Musilimaa kan ta’an lama utuu Polisootnii nama Afirikaa Amerikaa jiraatu tokko dulla pilaastikaa harkatti baataniin utuu dhaananii argee. Yeroo isaan sagalee olkaasuun polisoota sanaan “kan isin jirtan Alabaamaa osoo hin taanee New York keessa” jechuun dubbatan, polisoota keessa tokko itti galagaluun hamma rakkon sammuu irra gahutti dhaananiinii. Afuran Afirikaanota Amerikaa hafan gara mana hidhaatti guuramanii.
Namnii taatee kana argee itti waan himeef Malkolm X’f miseensa maatii musilimaa kan ta’an garee xiqqoon waliin gara Bufata polisii deemuun Johnsoniin dubbisuu akka qaban gaafatanii. Jalqaba irratti namnii maqaan isaa Johnson jedhaamu hidhamee akka hin jire ha haalan malee yeroo baay’inni nama gafii kana gaafachutti jiruu dhibba shanii ol ta’uu Malkolm seenee akka haasofsiisuuf eyyamanii. Erga daawatee booda Malkolm X Johnson waan miidhamee jiruuf Ambulaansiin gara hospitaala Hermel akka geesuuf dhiibaa taasisee.
Yeroo Johnson yaalamuun gara Bufata Polisitti deebi’u namoota kuma afur kan ta’an bakketti sanattii walitti qabanii turanii. Bufata polisii keessatti ammo Malkom X’f abban seeraa musilimoota lamaaf haala isaan wabiin itti ba’uu danda’aan mijeessa turanii. Johnsoniif wabiin akkasumas gara hospitaala deemuun hamma guyyaa itti aanu gara mana murtitti dhihaatutti akka hin danda’amne himaniifi. Malolm X haalli yeroo sana turee hamaa ta’uu isaa waan hubateef buufata poolisii sana keessa gadi ba’uun akka ummatni hammi sun bakka sana gadi dhiisee deemu mallatoo harkaan himeefi. Maatiin hawwasa musilimaa osoo hin dubbatin callisaan bakka sana dhiisanii deemanii. Haaluma kanaan namootni miseensa maatii kana hin taanee kan bakka sana turan bakka sana gadi dhiisuun deemanii. Qondaalli poliisii tokko dhabbata Oduu New York Amesterdam jedhaamutti akkana jechuun dubbate ; “Namnii kamuu aangoo hamma kana qabaachuu hindanda’uu…”. Ji’uma sana departimenti polisii magaala new York Malkolm X akka irra xiyyefanoo adda kaa’uun waa’esa qoratani taasifamee. Qoranoon kun magaalaa inni kanaan dura keessa jiraachaa ture fi Mana hidhaa itti hidhamee ture keessattii jireenya akkamii akka geggesaa ture qorachuu dabalata turee. Yerooma sana abban murtii olaanaan nama johnsan irraan balaa cimaa kana gahee akka yakkamaadha jedhee akka hin fudhanee himee. Ji’a Onkoloolessa keessa Malkolm X aarii qabu ibsachuun telegiramaa angawa motumaa saniif ergee. Akkuma sanaan polisotnii harka lafa jalaan Maatiin hawwasa musilimaa kun akka diigamuu irratti garee hojjetu hundeessuun socho’uu eegalee.
FUDHATAMNII ISAA DABALAA DEEMUU!
Dhuma bara 1950’mota keessa Malkolm X maqaa haaraa Malkolm shabazz ykn Malik el_shabazz jedhamu fayyadamuu haa eegalu malee baal’inaan kan inni ittiin waamamu Malkolm X’n turee. Haalota garaa garaa ilaalchisee yaadnii inni laatuu barruun, Raadiyoniin akkasumas TV irratti yeroo yeroon darbuu waan jalqabeef TV’n magaalaa new York bara 1959 waa’ee hawaasa maatii musilimaa “jibba jibba omishu” jechuun qillensa irra olchee.
Bara 1960 yaa’ii walii gala motummota gamtomanii kan magaala New York irratti kaayyo afrikaanoota waliigalaaf jecha aferamee achi irratti argamee. Achirrattis bulchitoota Afrikaa keessaa kan akka Gamal Abdel Nasser (Gibtsi), Ahimed Seko Turee( Giinii) fi Kenet Kuanda (Zaambiyaa ) waliin wal argee jiraa. Fidel Kastironille Yaa’ii kana irratti kan hirmaate yoo ta’uu Malkolm X ifaa ifatti bakka bu’aa koomitee Harlem ta’uun simanaa taasiseefi jira. Kaastiroon hamma dhuunfaan wal aggaree haasofna jedhutti Malkolm X’n ajaa’ibsiifatee. Wal arganii erga sa’a lamaaf haasa’anii booda Kaastroon akka Malkolm X kuubaa dhaqee daawatuuf Afeerra godheefi.
DEEGGARSAAFI BARSIISA INNI YEROO HAWWASA MUSILIMAA WALIIN TURE GOCHAA TURE!
Yeroo hawaasa musilimaa kanatti bara 1952 dabalamee kaasee hamma bara 1952 hawaasa kana dhiisee ba’eetti ,Malkolm X barsiisa hawaasa musilimaa kana deeggaraa turee. Barsiisotni kun amantaalee armaan gadditti eeraman of keessa qaba.
~ Ummatnii gurrachi ummata addunyaa kana irra uumata jiraachuu jalqabe warra duraadha.
~ Warrii Adii Seexanoota.
~ Gurrachotnii warra Adiin oli kan jedhuufi
~ sanyiin warra Adii kun lafa irra baduun isaanii waan hin hafnedha kan jedhu turee.
Warrii adii baay’eeniifi guraachotni muraasni barsiisa isaa kanaatti rifatanii turanii. Inniif haawwasnii maatii Musiliimaa kan isaan ibsamaa turan warra jibba facaasan, Olaantumma gurrachotaa warra lallaban, jibba sanyii warra ofkeessa qaban, goliif warra jiraatan,addaan baastotaa fi akka qomoon garaa gara walitti hindhufneef balaa akka ta’anittidhaa. Nama jibba sanyii lallabu jedhamuunis himatamee. Kaayyoon sochii mirga dhala namaa mirga filuuf filatamuu Afirikaanotnii Amerikaa akka qabaatan gochuu yoo ta’uu hawwasnii maatii Musilimaa kunneen gara hordoftootni isaanii filanoofi sochii siyaasa kan biroo keessatti akka qooda hin fudhanne dhorkamaa turanii. Dhaabbileen mirga dhala namaaf falman inniifi hordoftootnii maatii kanaa Mankararistiita yaada isaanii malee kan nama kan biraaf bakka hin qabnee,kan ilaalchi isaanii Afirikaa bakka hin buune jechuun balaaleffatanii turanii.
Malkolm X jara kana ittin jedhaniin qixxe mirga dhala namaaf falmaa. Martin Luter King Jr. irraan kan hafe geggesitootni dhaabbata mirga dhala nama kan biroon akkasumaan kan ta’aniifi fayidaa dhuunfa warra adiif qofa kan dhaabbatanidha.Malkolm X Afrikaanotnii hundi gara Afrikaatti deebi’uu qabu yaada jedhu waan qabatee deemaa tureef hammaaitti biyyii haaraan warrii adiin keessa hin jiraanne umamuu qaba jedha turee.Kanaaf akka warrii dhabbata mirga dhala namaaf falman jedhan warra adii waliin wal danda’anii jiraachuu osoo hin taane irra adda baanee jiraachuu qabna jedha turee.Sochii wallabaa isaan godhanis harkatti busheesuun karaa fudheeniis ta’u bilisumman kenya dhufuu qaba jedhee amana turee.Baay’een namootaas yaada dhabbata mirga dhala namaaf falmanii nuffanii waan turaniif Malkolm X’n hordofu eegalanii!
SENAAN MALKOLM X KANAAN HIN DHAABBATUU…GULAALTOTNI BARREFAMA KANAA ISIN WARRA DUBBISEE XUMMURE WAAN TA’UUF YAADA KEESSAN ANAAN GAHUU HIN DAGATINAA!
← SEENAA MALCOLM X (EKS) KUTAA TOKKOFFAA!-Temesgen Atnafu Mulatu’tiin (Seenaa Waa Guddaan Irraa Baratamu)
MALKOLM X [Kutaa lammafaa] YEROO MALKOLM EKS MAATII MISEENSA MUSILIMAA TA’UUN DABARSE MAAL FAKKAATA TUREE? →